Acquire.io: Madal Midaysan oo Ka Qayb Qaadashada Macaamiisha | Martech Zone
Macaamiilku waa halbowlaha ganacsi kasta. Hase yeeshe, dhowr shirkadood oo keliya ayaa la socon kara dalabkooda isbeddelaya, iyagoo ka tagaya daaqad weyn oo fursad ah shirkadaha diyaar u ah inay maal gashadaan waayo-aragnimada macaamiisha iyo inay horumariyaan qaybtooda suuqa.
Si la yaab leh maahan, maaraynta CX waxay u soo baxday mudnaanta koowaad ee hoggaamiyeyaasha ganacsiyada kuwaas oo dhigaya qaddar sii kordhaya oo ilo ah si ay u helaan. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan la helin tiknoolajiyad sax ah, suurtagal maaha in la gaaro heerka shakhsi ahaaneed iyo khibradda omnichannel ee macaamiisha casriga ahi dalbadaan. Sida laga soo xigtay sahan Adobe ah, shirkadaha leh kaqeybgalka ugu weyn ee macaamiisha omnichannel waxay ku raaxaystaan ​​a 10% koritaanka YOY, 10% koror ah celceliska qiimaha dalabka, iyo 25% koror ah heerarka dhow.
Ka sakow filashada adeegyo isku mid ah meelo badan oo taabasho ah, habka ay macaamiisha u rabaan in loogu adeego ayaa iyaduna is beddelaysa, iyadoo 67% waxay doorbidayaan is-adeegsi lahadalka wakiilada shirkada. Isku soo wada duuboo, xawaaraha iyo ku habboonaanta ayaa ah rukummada adeeg macmiil oo hufan. Shirkadaha fahmay tan waxay mudnaanta siinayaan teknoolojiyada kobcineysa faa'iidooyinkan ku qaadashada tikniyoolajiyada kaliya iyadoo loo daneynayo inay noqdaan kuwo qatar ah, warbixinnada PwC.
Guudmarka Ka-Qaybgalka Macaamiisha Acquire.io
Hel waxay bixisaa lacag bixinta-sida-aad-tagto macaamiisha adeeg madal otomaatig ah taasoo awood u siinaysa hillaac-degdeg ah, hufan, iyo isgaarsiinta waqtiga-dhabta ah ee macaamiisha, taasoo horseedaysa shaqaale faraxsan iyo macaamiil qanacsan. Iskudhafka muuqaalka hodanka ku ah ka sokow, softiweerku wuxuu siiyaa hal il oo run ah dhammaan isdhexgalka macaamiisha si aad uga jawaabi karto su'aalaha hal dashbood adigoo aan waligaa lumin wadada.
Barmaamijka otomaatiga ee adeegga macaamiisha ayaa ujeeddadiisa loo dhisay in lagu socodsiiyo isgaarsiinta dhammaan meertada nolosha macaamiisha isla markaana loo suurtageliyo khibrad omnichannel ah iyada oo aan laga helin kaabayaasha IT-da ee adag ama la shaqaaleysiiyo ciidan badan oo ka tirsan macaamiisha adeegga macaamiisha.
Barmaamijka 'Acquire platform' wuxuu asal ahaan ka yahay madal hawlgelinta macaamiisha oo dhan oo leh awoodo sida wicitaanada fiidiyowga, wada sheekaysiga tooska ah, wicitaanada iyo SMS, emayllada, wicitaanada VoIP, cobrowse iyo shaashad wadaagga. Intaas kuma eka - madalku wuxuu la yimaadaa gorfeyn isku dhafan si loo cabbiro loona falanqeeyo xogta macmiilkaaga aragti qoto dheer, shaqsiyeyn dheeraad ah, iyo si toos ah u kobcinaysa astaamaha macaamiisha. Waxa kale oo jira waxqabad aasaasi ah oo aqoon ah oo lagu abaabulayo ilahaaga macaamiisha ah ee wajahaya kaydinta macluumaadka is-adeegsiga ee si fudud loo heli karo si looga caawiyo macaamiisha inay xalliyaan weydiimahooda, iyadoo la sii yareynayo kharashaadkaaga adeegga macaamiisha iyo kor u qaadista ka-qaybgalka.
Barxadku wuxuu hubiyaa iswaafajinta iskudhafka kumbuyuutarka wuxuuna bixiyaa 50 + isdhexgal, taas oo macnaheedu yahay Helitaanka waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lala kaashanayo ilahaaga IT ee jira sida iibkaaga, taageeradaada, bulshadaada, falanqayntaada, iyo qalabka SSO ee isdhexgalka bilaa cilmiga ah iyo aragtida xogta midaysan.
Soo iibso waxay ku qalabeysaa kooxaha ganacsiga dhammaan aaladaha dhijitaalka ah ee ay u baahan yihiin si ay u daaweeyaan khibradaha macmiilka ee gaarka ah iyadoo la hagaajinayo wadahadalka macaamiisha ee iibka, taageerada, iyo kor u qaadista. Waxay siisaa wakiiladda taageerada macaamiishaada xirmo la miisaami karo, oo aan la soo dejin karin, iyo aalado is-dhexgal ah si ay macaamiisha ugu hagaan mareegaha iyo abka-waqtiga dhabta ah.
Kooxdaadu waxay heshaa is-dhexgal adeegsade fudud oo caqli-gal ah oo siinaya iyaga aragti mideysan oo booqashada, intee in le'eg ayuu isticmaale-suge ahaa, iyo faahfaahinta kale ee ku saabsan adeegsadayaasha laga soo qaatay barnaamijyada isku-dhafan ee kala duwan iyo taariikhda baaritaanka. Barxadda ayaa sidoo kale haysa rikoodh buuxa oo ah taariikhda sheekaysiga waxayna maamushaa warbixinno otomaatik ah oo leh faahfaahin kooban oo ku saabsan wadahadalka ka dib si loo siiyo hoggaamiyeyaasha kooxda iyo kormeerayaashu kantarool buuxa oo ku saabsan wada hadalka macaamiisha. Qaar ka mid ah astaamaha loogu jecelyahay ee ku-meel-gaadh madal ka-hawlgalka macaamiisha midaysan waxaa ka mid ah:
1. Wadahadal Toos ah
Wadahadalka tooska ah waxaa loo yaqaanaa inuu kordhiyo kaqeybgalka macaamiisha iyadoo la hubinayo taageerada waqtiga dhabta ah, taas oo sidoo kale kordhisa kalsoonida macaamiisha iyo daacadnimada, taasoo horseedaysa soo celinta iibka.
Hel wada sheekeysi toos ah waxaa loo isticmaali karaa si aan kala go 'lahayn aalado badan, daalacashada, iyo kanaalada dhijitaalka ah si loo hubiyo taageerada baahida loo qabo macaamiisha inta lagu jiro saacadaha shaqada.
Macaamiisha casriga ah, ee kuxiran hyper-ka waxay dalbadaan fiiro gaar ah 24/7, taas oo lagu suurta galin karo iyadoo la geeyo chatbot xuduudahaaga dijital ah. Barxadda 'Acquire platform' waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex sameysatid sheeko-xayeysiis calaamadeysan adigoon wax codeyn ah lahayn. Si fudud u dooro ujeedada bot-gaaga oo dhis shaqooyin caadiya oo aad uga jawaabto weydiimaha soo noqnoqda si toos ah, 24/7, adigoon culeys ku saarin shaqaalahaaga taageerada.
Hadday tahay wax soo saar alaab soo saarid ah ama ciladbixinta dhibaatooyinka cakiran, Barmaamijka 'Acquire platform' wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto oo aad la macaamisho daalacayaasha macaamiishaada adoo adeegsanaya tilmaamo muuqaal leh isugeyn farsamada. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan Soo-helista wada-shaqeynta ayaa ah inay u baahan tahay fur-furan ama soo-dejin labada dhinacba isla markaana isla markiiba lagu bilaabi karo guji, taasoo ka dhigaysa hawsha mid dhakhso badan, dhib-la'aan ah, oo aad u xiiso badan.
4. Barnaamijka Saldhigga Aqoonta
Barxadku wuxuu la yimaadaa barnaamij aasaas u ah aqoonta aasaasiga ah si loo ururiyo loona abaabulo macmiilka u wajaha ilaha xarunta kaalmada si toos ah u ballaarinaysa oo si fudud loo heli karo hage. Dhisida ilahaaga iscaawinta ah, Ku hel macluumaadkan ku-xirnaantaada sheekaysigaaga, qabashada shuruudaha, iyo soo jeedin otomaatig ah si aad awood ugu siiso caawimaad otomaatig ah arrimaha murugsan adigoon u baahnayn wakiilo nool.
5. Inbox la wadaago
Way fududahay in lagu wareejiyo wadiiqooyin isgaarsiineed oo badan oo lumiyo raadinta isdhexgalka macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, Barmaamijka kaqeybgalka Macaamiisha Hesho ayaa xallinaya caqabaddan iyada oo la siinayo wakiilladaada sanduuq mideysan oo isku xiraya taageeradaada emaylka iyo inta kale ee kaabayaasha taageeradaada ah si loo abuuro hal muraayad oo muraayad ah oo loogu talagalay dhammaan isdhexgalka macaamiisha. Natiijadu waa fowdo iyo jahwareer yar - maadaama wakiilladaadu ay arki karaan dhammaan ka-qaybgalka macmiilka, oo ay ku jiraan emayllada, hal jadwal oo taariikh ahaaneed oo macaamil kasta ah, kana jawaabi karaan emayllada isla dashboodka sida wada-hadalka tooska ah, warbaahinta bulshada, VOIP, SMS, iyo in ka badan.
6. Wadahadal Video ah
Waxaa xaqiiqo ah in inta badan macaamiisha ay doorbidaan isdhexgalka aadanaha, gaar ahaan markay la macaamilayaan arrimo murugsan ama macaamil ganacsi. Hesho madal kaqeyb qaadashada macaamiisha waxaa ka mid ah muuqaal fiidiyow ku sheekeysiga ah oo kuu oggolaanaya inaad kula xiriirto macaamiishaada, fool-ka-waji, adoo adeegsanaya barta isgaarsiinta ee ay doorbidayaan hal guji oo keliya ka soo qaad dashboard-ka.
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan muuqaalka sheekaysiga fiidiyowga ayaa ah inay u baahan tahay rakibid la'aan waxayna u oggolaaneysaa labada dhinac ee fiidiyowga hal-dhinac iyo laba-dhinac ah, iyo sidoo kale duubista fiidiyowga. SDK mobiilku wuxuu ka dhigan yahay inaad sidoo kale u habeyn karto waayo-aragnimada fiidiyow ee moobilkaaga aqoonta eray bixinta.
Sheeko Guul Macaamiil Oo Lagu Kuulay Iyadoo Lagu Hesho Madal Taageero Macaamiil Inta Uu Socdo Faafka
The Kooxda Dufresne, Tafaariiqle ah alaab iibiyaha guryaha ee Premier Canadian ah, wuxuu hirgeliyay Ku hel fiidiyowga lagu sheekeysto ee loogu talagalay dayactirka alaabta guriga si loo soo dejiyo kharashka dayactirka alaabtooda loona hagaajiyo ka qeyb qaadashada macaamiishooda internetka. Iyagoo adeegsanaya fiidiyowga 'Acquire', kooxdu waxay booqashadii ugu horreysay ee guriga u rogtay kormeer fiidiyow ah kaasoo yareeyay tirada booqashooyinka guriga nuskeed iyo sidoo kale hagaajinta xawaaraha adeegga si aad ah. Nasiib darrose, intii ay shirkaddu ku raaxeysaneysay guusheeda, aafada ayaa ku dhacday 2020, taasoo caqabad hor leh ka dhigtay kala fogaanshaha bulshada iyo ku dhowaad nil dukaanka ku soo booqday iibinta qalabka guryaha.
Xalku wuxuu jiifay daqiiqad Eureka ah oo kooxda u horseeday inay gaystaan ​​wada sheekaysiga fiidiyowga ee iibka iyadoo la adeegsanayo barnaamijkii horay loo yaqaan ee Helitaanka. Ku darida wada sheekaysiga tooska ah iyo 24/7 bot ayaa sii kordhiyay shakhsiyaynta suuq geynta iyo daaweyn la taageeray, taasoo horseedaysa kaqeybgal sare iyo iibin. Adoo soo bandhigaya safarro fiidiyoow ah oo loogu talagalay alaabta guriga iyo hirgelinta tikniyoolajiyada isku-dhafan si loogu soo celiyo waayo-aragnimada dukaanka, tafaariiqle ayaa udub dhexaad u noqon kara qaabka dukaanka ee iibka khadka tooska ah iyada oo aan lahayn maalgelin dheeraad ah ama tababar.
Waad akhrisan kartaa daraasadda kiiska ama hagaajin kartaa demo si aad u aragto sida Acquire ay u beddeli karto ganacsigaaga adoo otomaatig u ah adeegga macaamiishaada adoo adeegsanaya qalabkeeda iyo ciyaarta.
Akhriso Daraasadda Kiiska La Helay Ballanso Soo iibso Demo
Tags: iibso.iowicitaanadachatbotisugeyntaageero macaamiishaKooxda Dufresnesaldhiga cilmigawada sheekeysi toos ahdusha saaraniibkasanduuqa la wadaagoSMStaageeroWicitaanada videovoip